Disney Plus Student Discount (2020) - Fepetra takiana - Fialam-Boly
Disney Plus dia serivisy mivantana. Mbola vaovao ny sehatra raha oharina amin'ireo mpamatsy hafa. Vao tsy ela akory izay no nisy fivoarana niaraka tamin'ny tranonkala. Disney Plus dia malaza indrindra noho ny fampisehoana superhit The Mandalorian.
Ilay meme zazakely Yoda dia nanjary fampiroboroboana mora foana ny serivisy. Malaza be eo amin'ny besinimaro izy io. Misy tolotra maro sy fihenam-bidy misy. Ny mpianatra indrindra no tena te-hanararaotra ireo serivisy ireo. Afaka mahita mpampiasa be dia be mampiasa an'io serivisy io ianao. Ny taona 2020 dia ny mijery ny seho farany. Samy mitady fomba vaovao handaniana ny fotoanantsika isika rehetra. Androany dia hiresaka amin'ny antsipiriany momba ny Disney miampy fihenam-bidy ho an'ny mpianatra izahay.
Manana fihenam-bidy ho an'ny mpianatra ve ny Disney Plus?
Ny ankamaroan'ny serivisy mivantana mivantana dia manome fihenam-bidy ho an'ny mpanjifany. Marina ve izany ho an'ny Disney Plus? Tsia ny valiny satria sehatra vaovao io. Ny tanjon'ny serivisy dia mikendry ny hanitatra ny faritra misy azy ireo. Rehefa lasa malaza ny sehatra dia misy ny mety hisian'ny tolotra ho an'ny mpianatra. Amazon Prime dia iray amin'ireo mpifaninana izay manana fihenam-bidy ho an'ny mpianatra. Vaovao ihany ny orinasa fialamboly. Azontsika atao ny manantena azy ireo hanaraka ny dian'ny Spotify sy Amazon prime tsy ho ela. Hatramin'izao, tsy mbola misy fanamafisana toy izany.
Fanolorana mpianatra bebe kokoa tokony hojerena:
Dingana hisoratra anarana amin'ny Disney Plus:
Midira amin'ny kaonty Disney plus na dia tsy misy fihenam-bidy ho an'ny mpianatra aza. Tena mahavariana ny atiny, ary mino izahay fa hankafizinao tsara ny serivisy. Amin'ity toro-lalana ity dia miresaka momba ireo dingana maro ilainao hisoratra anarana amin'ny Disney Plus.
Ny dingana voalohany dia ny fitsidihana ny tranokala Disney Plus. Afaka manindry an'ity rohy ity ny mpampiasa - https://www.disneyplus.com/ . Malaza be izy io ary misy amin'ny faritra vitsivitsy manerantany ihany. Azonao atao ny mahita ny pejy fandraisana ho feno fampahalalana. Misy safidy an-taonina azo alaina hisoratra anarana. Azonao atao ny manindry ny bokotra fisoratana anarana hanombohana ny fizotrany.
Somary mahitsy ny fizotran'ny fisoratana anarana. Mila manampy antsipiriany madinidinika manokana ianao.Ny fampahalalana voalohany dia ny adiresy mailakao. Ny mpampiasa dia afaka misoratra anarana amin'ny ID rehetra eo amin'ny lampihazo. Tsy ilaina ny karapanondro ho an'ny mpianatra.
Ny dingana faharoa dia ny famoronana teny miafina azo antoka. Mila mitandrina ireo mpampiasa satria miankina amin'ity fampahalalana ity ny fiarovana anao. Betsaka ny tranga misy kaonty voajirika an-tserasera amin'izao fotoana izao. Ny teny miafina azo antoka dia misy litera, isa ary litera manokana.
Ny dingana farany amin'ny fizotran'ny fisoratana anarana dia ny manampy ny fampahalalana momba ny fandoavam-bola. Afaka mividy ny famandrihana isam-bolana $ 6,99 ny mpampiasa. Izy io dia vidiny tsara ho an'ny serivisy streaming.Afaka manangona vola mandritra ny roa volana ianao amin'ny fividianana ny drafitra isan-taona. Handany vola $ 69,99 ianao mandritra ny 12 volana. Hiaro anao amin'ny olana rehetra izany.
Dia izay! Manantena izahay fa hanampy anao hanomboka fialamboly haingana izany. Ny tranokala Disney plus dia misy atiny betsaka. Andramo izao anio ary manomboka mizaha ny lampihazo.
Manolotra amin'ny Disney Plus:
Misy tolo-tolotra misy am-polony maro izao ho an'ny mpampiasa Disney Plus. Raha mieritreritra ny hijery ny serivisy ianao dia izao no fotoana mety. Iray amin'ireo tolotra tsara indrindra omen'izy ireo ny drafitra telo ao anaty iray. Ny mpampiasa dia afaka mandoa serivisy premium telo amin'ny famandrihana iray. Fahitana tsy fahita firy ho an'ny mpampiasa maro izany.
Disney dia orinasa fialamboly goavambe. Manana anjara toerana lehibe amin'ny orinasa fialamboly lehibe izy ireo. Amin'izao fotoana izao dia manolotra drafitra iray ahitana Disney Plus, Hulu (Ad Support), ary ESPN Plus izy ireo. Izy telo dia miavaka ary manolotra fialam-boly manara-penitra. Ireo mpampiasa dia afaka mahazo ireo programa telo ireo amin'ny vidiny $ 12.99 isam-bolana. Fifampiraharahana lehibe io raha dinihina ny safidy hafa. Afaka manangona vola aman-taonina ianao.
Endri-javatra ny Disney Plus:
Misy endri-javatra premium indrindra izay atolotry Disney ho an'ny mpanjifany. Azonao atao ny mijery ireo safidy eto. Ireo mpampiasa dia afaka mankafy ny serivisy mahafinaritra miaraka amin'ny mora. Araraoty tsara ny tolotra streaming-nao.
1. Mizotra hatraiza hatraiza
Ny sehatra Disney plus dia misy amin'ny fitaovana rehetra. Ireo mpampiasa miaraka amin'ny fitaovana misy dia afaka miditra mba hiaina fialamboly tsy voafetra. Ny fampiharana dia misy amin'ny iOS sy Android fitaovana rehetra. Ireo mpampiasa dia afaka mizaha izany amin'ny PS4 sy Xbox azy ireo ihany koa.
Ireo fitaovana Smart TV koa dia manohana fampiharana mahafinaritra. Serivisy premium hafa toy ny Fahitalavitra afo SY Chromecast stream koa ny fihodinana. Tsy misy fetra amin'ny filànao mikoriana. Andramo anio hizaha ny atiny premium.
2. Fitaovana marobe
Disney Plus dia manome streaming mitohy amin'ny fitaovana efatra. Izy io dia singa tsara indrindra raha ampitahaina amin'ireo sehatra OTT premium hafa. Mpianatra maro no aleony mizara kaonty.
Ity dia fomba tsara handehanana amin'ny kaonty iray ihany. Ny trano tokana dia mety hanana mpijery marobe ihany koa. Misy olona tia karazana karazany ao amin'ny trano iray. Safidy mety indrindra ho an'ny fianakaviana misy fahita fahita fahitalavitra io.
3. Votoatiny miavaka
Disney no loka lehibe indrindra amin'ny sarimihetsika sy fahitalavitra. Ny tontolon'izy ireo dia feno fampisehoana mahatalanjona maro.Ny olon-drehetra dia tia ny atiny Marvel, Lucasfilms, Pixar, ary Disney. Afaka mahazo ny traikefa sinema amin'ny trano ianao.Ao amin'ny sehatra Disney plus ihany no ahitanao ireo atiny manokana rehetra ireo.
Seho malaza sasany ireo.Na iza na iza dia afaka manomboka miaina izany ao an-trano. Jereo ny tianao sarimihetsika mahery fo ary fandaharana amin'ny fahitalavitra.Ny Mandalorian avy amin'ny franchise Star Wars dia ohatra tsara. Efa an-dàlana izao ny atiny vaovao avy amin'ny studio samihafa.
Ireto ny sasany amin'ireo endrika mahafinaritra indrindra amin'ny Disney Plus. Manantena izahay fa manana fotoana mahafinaritra ianao amin'ny fizarana traikefa toy izany.
Mendrika ve izany?
Tonga hatrany amin'ity fanontaniana lehibe ity izany. Mendrika handany vola ve ny sehatra? Mpampiasa maro sahady no efa manana famandrihana premium amin'ny serivisy mivantana.
Mety tsy hisy dikany eo noho eo ny fampiasam-bola amin'ity sehatra ity. Mpankafy lehibe ny Disney Plus izahay. Na izany aza, tsy misy fihenam-bidy ho an'ny mpianatra amin'ny serivisy. Azonao atao ny mankafy atiny tsara indrindra izay tsy misy na aiza na aiza. Ny drafitra telo amin'ny iray no tena vidiana lafo indrindra. Ny Disney Plus ihany koa dia azon'ny mpampiasa ampiasaina raha te-hitahiry vola vitsivitsy. Ny fandaniana $ 6,99 isam-bolana dia tsy vola be ho an'ny mpampiasa maro.
Amin'ity toro-lalana ity dia manandrana mamaha ny fisalasalanao maro momba ny serivisy mivantana streaming Disney Plus izahay. Lasa hery manjaka amin'ny kolontsaina ankehitriny izy io.
Tian'ireo tanora ny seho sy ny sarimihetsika hita eto. Azonao atao ihany koa ny manandrana azy anio!
Tsy maintsy vakiana: F ree tranokala streaming Movie - Watch Movie Online
ny fomba fihainoana mozika tsy voasakana
iphone niraikitra tamin'ny sary famantarana paoma iphone x
tranokala misy fandaharana amin'ny fahitalavitra maimaim-poana
inona ny fampiharana anaovanao ny tenanao
harry potter araky ny famotsorana azy